Chinokosha chebudiriro yekutsvaga injini yekushambadzira inzira yekunzwisisa mazwi akakosha anotsvaga injini yekutsvaga kutsvaga kambani yako. Iwe unogona kushamisika kuti mangani makambani andinotaura navo asina kumboita chero kiyi yekutsvaga. Mhedzisiro yekusaita tsvagurudzo muinternet nzira yekutengesa ndeyekuti kambani yako inomuka ichizivikanwa nemazwi asina basa - kukwezva vashanyi vasiri ivo kuwebhusaiti yako kana blog. Google ine
Forrester inofungidzira kuti yakabatana kushambadzira mari ichakura kusvika pamadhora mazana mana emadhora mugore ra4, ichiwedzera padanho rekuwedzera remubatanidzwa we2014%. Imwe yesarudzo dzatakaita nekutanga neCircuPress yaive yekuita mushandisi wese mubatanidzwa. Nenzira iyoyo, seemaimeri akatumirwa, kana muverengi akasaina mushure mekubaya iyo inofambiswa ne link, munhu anotumira email akapiwa mubayiro. Iri zano rakakwira mudenga nemapuratifomu akaita seDropBox… kupi
Ndichangogamuchira iyi email: ndakanzwa Douglas achitaura paBlog Indiana Indiana nezvekuti SEO yakafa sei uye mazwi akakosha haana kukosha sezvavaimboita. Unoita sei kunyatsogonesa vatengi veizvi? Unogona kufarira kutora kwako. Ongorora: Nepo mazwi akakosha asina kukosha ... zvichiri kukosha kushandisa akakosha mazwi akakosha. Isu tinoshandisa yakawanda nguva nevatengi vedu pakutsvaga kwemazwi makuru Slide yandakagovana nevateereri ku
Isu takatarisa makambani mazhinji achiita izvo zvavanodaidza kuti kutsvakisa kwemazwi akakosha uye ndinoshamiswa neruzivo rwakawanda rwavanosuwa pavanenge vachipa mazano kumakambani mazwi api avanofanira kunongedza nemaitiro avo ekutengesa zvemukati. Iyi mimwe mibvunzo yakakosha yatinopindura Ndeapi mazwi akakosha anotyaira shanduko? Kana iwe usingazive, ini ndinokurudzira kukurudzira kuongororwa analytics nemazvo uye nekumhan'ara kuitira kuti ugone kuona mazwi akakosha anotyaira bhizinesi… kwete traffic. Kukanganisa kukuru kwatinoona nevazhinji
6 Akajairika Keyword Manyepo
Wednesday, April 18, 2012 Muvhuro, Kukadzi 8, 2016 Douglas Karr
Sezvo isu tichiramba tichinyura mukudzika nekudzika kutsvagurudza nemakasitoma pane mhando yemazwi akakwezva ekutsvaga kwekutsvaga, tinoona kuti makambani mazhinji ane pfungwa isiriyo kana zvasvika pakutsvaga kwemazwi uye kushandiswa. Peji rimwe chete rinogona kumisikidza mushe kwemashoko akakosha. Vanhu vanofunga kuti vanofanirwa kuve nepeji rimwe pazwi rakakosha ravanoshuvira kunongedza… Hazvisi izvo chete. Kana iwe uine peji rinomira